टिकटक बनाउनेले अब पैसा पाउने, हेर्नुहोस् कसरी पाउछन् प्रयोगकर्ताले पैसा ? « गोर्खा आवाज
टिकटक बनाउनेले अब पैसा पाउने, हेर्नुहोस् कसरी पाउछन् प्रयोगकर्ताले पैसा ?
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार ०७:३४
एजेन्सी । टिकटक युवा वर्गमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । विभिन्न गतिविधिका कारण केहि देशमा यसलाई प्रतिवन्ध लगाएको पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय युवा उमेर बाहेकका मानिसहरु पनि यसमा झुम्मिने गरेका छन् । विभिन्न गीतका क्लिपमा नाच्ने र अभिनय गरेर अपलोड गर्न मिल्ने यो एप विश्वभर दुई करोड बढी पटक डाउनलोड भैसकेको छ ।
छोटो भिडियोका चर्चित चिनियाँ भिडियो प्ल्याटफर्म टिकटकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि अब पैसा दिने भएको छ । छोटो समयमै स्थापित टिकटकले खासगरी चर्चित प्रयोगकर्ता र नयाँ प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै यस्तो सुविधाको घोषणा गरेको हो । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले आफ्नो नयाँ घोषणाको लागि करिब २४ अर्ब रुपैयाँ (२० करोड डलर) को कोष बनाउन लागेको सीएनएनले जनाएको छ ।
यो सुविधाले रचनात्मक कन्टेन्टमार्फत प्रगतिको अवसर खोजिरहेका प्रयोगकर्तालाई सहयोग पुग्ने टिकटकले जनाएको छ । टिकटकका अनुसार उक्त कोषबाट यो बर्षको अन्त्यतिर नगद वितरण सुरु हुनेछ । टिकटकका अमेरिका महाप्रबन्धक बेनेसा वैनेसाले एक ब्लगमा यसको जानकार दिएकाे छ।